Ity no fomba hivarotana ny fanoharana amin'ny tantaranao | Martech Zone
Ity ny fomba hivarotana ny fanoharana amin'ny tantaranao
Alatsinainy Aprily 6, 2015 Talata, Aprily 7, 2015 Douglas Karr
Ny fanoharana mahazatra indrindra ampiasaintsika rehefa mivarotra ny serivisinay, manazava ny fizotranay ary mametraka ny zavatra andrasana amin'ny vinavinantsika dia miresaka vola. Imbetsaka isika no mandre amin'ireo mpanjifa milaza hoe:
Nanandrana izahay [ampidiro ny paikadim-barotra] ary tsy mandeha izany.
Hafiriana no nanandramanao azy? Nahavita inona ianao? Inona ny haben'ny fampiasam-bola nataonao? Andao hodinihintsika ny volanao amin'ny fisotroan-dronono… raha nanandrana izany ianao nandritra ny iray volana, tsy nifankahita tamin'ny mpanolo-tsaina ara-bola, ary nanambola vola an-jatony, ahoana araka ny eritreritrao ny hisotroanao ronono?
Ny metaphor dia mandeha tsara satria efa fantatry ny matihanina ny fomba fiasan'ny fampiasam-bola - na amin'ny fampiasam-bola amin'ny stock na amin'ny fametrahana vola kely amin'ny 401k. Izy io koa dia mametraka fanantenana maharitra fa tsy mila mientanentana na diso fanantenana amin'ny avo sy ambany isika fa kosa mifantoka amin'ny fironana maharitra. Miasa metaphors!
Ny zava-kanton'ny poeta mpamorona sary an-tsaina dia izao fahaizana ilaina amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra izay mila mitaona, mivarotra na mandresy lahatra ny hafa.
izany sary avy amin'i Anne Miller, mpanazatra fampisehoana sy kabary, mandalo anao amin'ny tombony rehetra, tetika ary koa ohatra amin'ny fivarotana an-tsary.
Tags: an'ohatrafanoharanaFanamafisana ny varotrafivarotanateny
7 Antony tsy hahatafataovan'ny Millennial ny atiny